Ogaden News Agency (ONA) – ONLF oo ku guuleysatay in Shirkadaha Shidaalka aan lamaal galin kana baxaan dhulka Ogaden
ONLF oo ku guuleysatay in Shirkadaha Shidaalka aan lamaal galin kana baxaan dhulka Ogaden
Posted by ONA Admin	/ August 2, 2012
Shirkada Shiinaha Petro Trans ee Shidaallka rabtay inay ka soosaarto Ogaden ayaa kabaxday dhulka Ogaden taariikhdu markay ahayd 1-di July 2012 iyaga oo arintaas shaaciyay inaysan shidaal kasoo saareyn Ogaden 31 July 2012. Shirkada ayaa sheegtay arrimo la xidhiidha ammaanka awgiis inaysan shidaalka kasoo saari karin dhulka Ogaden.
Shirkadan ‘China’ laga leeyahay ee Petro Trans ayaa warqad cabasho ah u gudbisay wasaarada Arrimaha Dibada ee Ethiopia warqadaas oo waxyaalo badan ku qornaayeen ayay waxay shirkadu ku eedaysay Ethiopia inay sugi wayday Amaanka Dhulka Ogaden Waxayna warqadaas ku sheegeen..In ay waayeen cid maalgalisa oo lacag deymisa mashruucan shidaalka Ogaden laga qodi lahaa kadib markii maal-galiyaashi deymin lahaa lacagta ay walaac ka muujiyeen amaan darada ka jirta Dhulka Ogaden.
“Lenders refused to fund the project citing “security concerns and sovereign financial credibility issues,” PetroTrans said in the document that was sent to the ministry.
Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa baaq badan ka soosaartay oo caalamka ay u dirayso in qofna uusan lacagtiisa ku bixin shidaalka dhulka Ogaden waayo ciddii isku dayda inay soo saarto shidaalkaas ayaga aya masuul ka ah nabad galyadooda. Jabhada ayaa u cadeysay in dhulkaas Daggaal kasocda shidaalka Ogaden aysan suurto gal aheyn in lasoo saaro illaa dadkaas ay ka gaadhaan xoriyadooda.
Hadaba Shirkada Petro Trans oo laga leeyahay wadanka China ayaa khayaali aan jirin isu sheegtay oo indhaha ka qabsatay khasaarihii shirkadihii ka horeyay kasoo gaadhay dhulka Ogaden. Waxayna shirkadan heshiis lagashay wadanka Ethiopia sanadkii hore July 2011- Ayaga oo balan qaaday inay maalgalin xoog badan ay ku sameyn doonaan sidii shidaalka loo soo saari lahaa.
Shirkada Petro trans ayaa 10 goobood qaadatay oo dhulka Ogaden kamid ah si ay shidaal ugasoo saarto waxayna balan qaaday in lacag ugu yaraan 5 Billion oo dollar ay ku maal galin doonto si shidaalkaas loo qodo. Iyada oo wadanka Djibouti iyo magaalada Barbara ay damacsanaayeen inay ka dhoofiyaan shidaalkaas.
Hadaba waxa aynu wada ognahay sanadkii 2011 in Maamulada kajira Geeska Afrika sida Djibouti, Ethiopia iyo maamulka Hargeysa ay isugu tageen Wadanka China si ay shirkadan usoo arkaan loona dhameystiro qorshahan.
Balse Ururka ONLF ayaa waxaas oo dhan albaabada isugu laabay, oo tusay awooda ururku leeyahay inaysan suurto gal aheyn in dhulkaas wax laga baadho ama laga qodo. ]
Shirkadan shidaalka qodaysay waxay danbiyo daggaal kageysatay dhulka Ogadeniya waxayna maleshiyaad ay dhaqaale xoogan ku bixisay ay gumaadeen dad aad u trio badan. Sidoo kale Shirkada ayaa damacsaneyd inay Ciidamo ‘Private’ ah ay ka keensato Wadanka China si amaanka shirkada loo sugo.
Waxaase kasoo soke maray kadib markii maalqabeenadi lacagta ku bixin lahaa shirkada ay lacagti kala noqdeen shirkadi lacagna loo waayay lagu maal galiyo lagu soo saaro shidaalkaas.
Waxa bilowday Dacwado wadanka Ethiopia iyo Shirkadan shidaalku ay isku oogayaan waxaana shirkadu ku eedeysay Ethiopia inay been u sheegtay oo dhul aan nabad aheyn ay sheegtay inay nabad galyo ka jirto Ururka ONLF-na uusan aheyn urur jira oo wadanka laga tir tiray.
Shirkada Petro Trans ayaa balan qaaday inay Geneva la aadayso wadanka Ethiopia dacwado aad u xoog badana ay ku qaadi doonaan. Sidoo kale Shirkada ayaa diiday inay ka baxdo heshiiska oo ay wareejiso Kontoraadi ay la gashay Ethiopia. Waxayna Ethiopia ugu hanjabtay in shirkad kale aysan Kontoraadan qaadan karin. Taas oo micnaheedu yahay waa in Ethiopia kasoo baxdo balankii dhankeeda ahaa oo dhulka Ogaden ay nabad ka hirgaliso.
Ethiopia shirkad yar oo tabar yar oo Woyanuhu iska leeyihiin ayaa sheegtay inay iyagu soo saari doonaan shidaalka Ogadeniya sanadka soo socda. Waxase la yaab leh Meeshi shirkadihi 5 Billion bixinayay ay awoodi waayen miyaa shirkad daciifa oo faqiir Ethiopian ahi u babac dhigi kartaa. Waa iska hadalka Woyanaha iyo cadadoodi.
Jabhada ONLF ayaa iyagu lagu yaqaana inay waxay balan qaadaan kaga dhabeeyaan, Waxayna guul u tahay dhamaan shacabweynaha Somalida Ogadeniya dhibkasto kasoo gaadha shirkadaha Shidaalka in hadana dhulkooda aan la boobi karin. waxayna caalamka u diraysa fariintan in shirkad kale dhulka Ogaden si dhibyar kusoo gali karin isla markaasna aan dib loo aamini doonin Gumeysiga Woyanaha oo been lagu bartay in shirkadaha Caalamka uu ku aqriyo kadibna dhibaato soo gaadho shirkadahaas.
Guul Guul Guul, Allaahu Akbar. Allay lehe waa guul aad loogu farxo oo aan kallaad laadin tii sanadkii 2007dii kaqabsatay cobale, balse waxaan dhihi lahaa ha iska daayaan baalalaynimada Saan cadkan indhaha Juuqsani.ONLF,na Qowlkeeda iyo Qorigeeduba waa xaga hore, wixii is hor taagana hooyadiibaa gablantay.